Uhlalutyo lwam: Uhlalutyo lukaGoogle lwe-iPhone | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 10, 2013 Douglas Karr
KISSmetrics ndikhuphe isicelo esitsha SIMAHLA se-iPhone esibizwa Uhlalutyo lwam. Yeyona ndlela ikhawulezayo yokubona ukuba i-Google Analytics yenza njani xa ukude edesikeni.
Kwangoko kulo nyaka, abantu be-KISSmetrics babejonge usetyenziso olufanelekileyo lweGoogle Analytics ukubanceda ukugcina iithebhu kwidatha yabo. Kwaye ababanga nako ukuyifumana. Nokuba ii -apps zeselfowuni zaziyi-WAY ezisisiseko kwaye zazingakuvumeli ukuba wenze uthelekiso, okanye bazama ukwenza INDLELA kakhulu kwaye kwakungekho lula ukuyisebenzisa.
Uhlalutyo lwam ibonisa idatha yakho yeGoogle Analytics xa usendleleni, entlanganisweni, okanye ufuna uhlaziyo olukhawulezayo.
kunye Uhlalutyo lwam, unokuthelekisa idatha yanamhlanje nezolo, usuku olunye kwiveki ephelileyo, nangolo suku lunye kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ungathelekisa idatha yezolo kunye neeveki ezidlulileyo okanye idatha yale veki kwiiveki ezidlulileyo.
Uhlalutyo lwam ikunika idatha oyifunayo kwangoko. Uya kufumana ukufikelela okukhawulezileyo kwiiNdwendwe zakho, abaNdwendwe abaKhethekileyo, ukujonga iphepha, iiNjongo, iiNtengiselwano ze-Ecommerce kunye neRhafu yeRhwebo.
tags: Ingeniso ye-EcommerceIntengiselwano ye-ecommerceimigomoi-google analyticsUsetyenziso lwe-google analyticsiOSiphoneukujonga iphephaIindwendwe ezizodwautyelelo
Iimpawu ze-6 Lixesha lokuTsala isoftware yakho yohlalutyo
Sep 20, 2013 kwi-3: 08 AM
Wow, ndicinga ukuba le app intle kakhulu kwabo bafuna uhlaziyo olukhawulezayo.